Ogaden News Agency (ONA) – Shri-wadatashi oy Odayaasha ku kulmeen Xerada Qaxootga Dhagaxlay
Shri-wadatashi oy Odayaasha ku kulmeen Xerada Qaxootga Dhagaxlay
Posted by ONA Admin	/ March 1, 2014
Maalin nimadii jamcaha taariikhduna ay ku beegnayd 28/2/14 waxaa xerada Qoxootiga ee Dhagaxlay lagu qabtay kulan aad ubalaadhan oo ay kasoo qayb galeen odayaasha dhaqanka ee bariga Africa. Kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen kaadirka iyo maamulka faraca Midnimo ee kahowlgala xerada Dhagxlay ayay ujeedadiisu ahayd kala warqadasho iyo lasocdsiinta xaalada guud ee geeska Africa iyo xogta dhabta ah ee wadanka Ogadenia.
Odayaasha oo aad utiro badnaa kana soo kala jeediyay dhulka Waamo looyaqaano iyo wadanka Ogadenia ayaa soobuux dhaafiyay hoolka uu shirku kadhacayay. Shirkan oo ahaa mid aan caadi ahayn ayaa furmay abaare 10:00 subaxnimo xiliga Dhadhaab waxaan sidii caadada ahayd lagu furay wacdi diini ah iyo aayadaha qur’aanka kariimka ah. Intaas kadib waxaa laguda galay ajandihii shirka oo ahaa kala warqaadasho iyo abaabul waxayna qaban-qaabiyayaash shirku soo bandhigeen warbixino aad udhaadheer oo dhinacyo badan taabanayay. Waxaa odayaasha looga warbixiyay xaaladaha siyaasadeed ee Geeska Africa iyo isbadalada ka socda waqtigan xaadirkan. Sidoo kale waxaa odayaasha laga haqabtiray warbixin aad utirfactiran oo lagasiiyay xaaladaha uu maanta
ku suganyahay dhulka Ogadenia iyadoo odayaasha lasoo hordhigay cadaymo muujinaya gumaadka aan kala joogsiga lahayn ee kajira Ogadenia. Waxaa sidoo kale odayaasha looga warbixiyay riwaayadaha ay kolba itoobiya soo jilayso oo ay uga danleedahay in ay tashuush kugaliso bulshada khaasatan kuwa aan dalka Ogadenia dhex joogin, waxaana odayaasha lasiiyay tusaalooyin kufilan oo ay wax ku fahmi karaan.
Dhanka kale odayaasha ayaa lagu dhaliilay aamuska ay ka aamusayaan markii dhibaato loo gaysto dad kasoo jeeda Ogadenia. Odayaasha ayaa lawaydiiyay sababta ay indhaha uga qabsanayaan markay dadka dariska ah qabtaan dad shacab ah ama siyaasiyiin ah oo ay ugacan galiyaan cadawgooodii guunka ahaa. Waxaana odayaasha toosaale loogu soo qaatay Axmad diiriye oo ah afhayeenka beelaha hawiye oo sikulul uga hadlay kadib markay ciidamada hawaarintu xasuuqeen dad ay isku hayb yuhiin oo gudaha Ogadenia dagan iyadoo lasoo qaatay erayadii kululaa uu adeegsaday markuu arintaas ka hadlayay.
Dhanka kale odayaasha oo hadalka markooda qaatay ayaa dhaliisha loo soo jeediyay aqbalay, waxayna aad usoo dhaweeyeen kulankan iyo ujeedooyinkiisaba. Odayaasha ayaa dhankooda ka warbixiyay aqoonta ay Itoobiya uleeyihiin iyo dabciga uu gumaysigu leeyahay. Waxaa odayaasha goobta fadhiyay kamid ahaa odayaal usoo joogay xiligii Soomaaliya ay gumaysiga kujirtay iyo markuu socday dagaalku udhaxeeyay dhaqdhaqaaqii NFD iyo dowladii Kenya, waxayna qireen in uusan gumaysi ahayn wax lasoo dhawaysto. Dhanka kale odayaasha ayaa kahadlay midnimada guud ee dadka oo waxa badan wadaaga dagan Ogadenia, Jubalan iyo NFD waxayna aad uga hadleen mihiimada ay leedahay iyo sida loogu baahan yahay in hal meel laga soo wada jeedsado.
Dhanka kale mid kamid ah odayaashii madasha fadhiyay oo 2ba bilood kahor booqasho kutagay wadanka Ogadenia ayaa hadalkiisii kubilaabay waxaad moodaa wiilasha inala hadlayay in ay hada joogaan wadankii waayo waxay ka waramayaan waa wixii aan wadankii kusoo arkay, wuxuuna intaas kudaray in uu indhihiisa kusoo arkay gibirka oo la bixinayo iyo xabsiyada oo laga buuxo. Odayga oo booqashadiisa kutagay gobolada Afdheer iyo Shabeele ayaa sheegay in hormarka Goday lagu sheegayo ee dhanka beeraha ah ay samaynayaan dadka dhulka iska leh oo sida uu sheegay 8 qof intay shirkowdo ay hal matoor soo gashadaan, wuxuuna sheegay in ay qolada TV yadu sawiranayeen beeraha ay dadku leeyihiin oo hadba tvga nalaga tusayay iyagoo leh waxaan hormar gaadhsiinay beeraha Goday marka waxaan layaabay ayuu yidhi wiilasha warbixintooda oo ahayd wixii aan soo arkay uun.
Iskusoo wada duub oo kulankan maanta ayaa ahaa mid siwanaagsan loogu taageeray guud ahaan halganka hubaysan ay JWXO hurmuudka utahay iyo shacabka dulman ee kasoo qaxay wadanka Ogadenia.